ကဗျာ – ကဗျာဆရာ – ကဗျာလောက | MoeMaKa Burmese News & Media
ကဗျာ – ကဗျာဆရာ – ကဗျာလောက
ဝါသနာက စ၏ ။
လေး ပေါ့ တိမ် နက်
“ ငါကွ…ဘာတဲ့…ငါဟဲ့ “ လို့
အဖွဲ့ အဖွဲ့ တွေကများ
အဟောက် အငေါက် ကသန်
ဘာ…တုံး ? ဘယ်…တုံး ?
တုံး ? နဲ့ ဘယ်… ဘာ… ကြား
လည်ဝမှာလဲ နင်ကြ ။
ထင်ရာ အာသူလဲ ရှိ
ပညာ ပါသူလဲ ရှိ
များစွာသော ကဗျာကဝိ ။
တောမှ ကျွန်ုပ် ရောင်လယ်လယ်
ဘယ်ကိုစေ လှမ်းရပါ့ ။
ဝါသနာအရ ၊ ကဗျာကိုရေး
လက်သွေးတဲ့ စာ ၊ ဖွာ လန် ပျံ့ ကျဲ
အလွဲက များ ၊ အမှားက လှိုင်
မပိုင် အရေး ၊ အတွေး မထက်
လက်လဲ မမှန် ၊ စာလဲ နံဆဲ ။
တင်မိုးရဲ့ကဗျာ “ စာဆိုဘဝ “
ကျွန်ုပ်….အနေတတ်အောင် ကြိုးစားမိ ။
ဆရာကြီးဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း (၆) နှစ်ပြည့်အတွက် ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ထားပါသည်။